> Resource > Ladnaansho > Top Phone 10 Cell Data Recovery Software
Halkan waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah software ka gashay kaalinta ugu fiican marka ay timaado soo kabashada xogta laga telefoonada.
Operating Systems: Windows 98/2000/2003 / XP / Windows 7/8, Vista
Mid ka mid ah software ka waxtar leh soo kabashada ee photos iyo sawirrada telefoonada iyo kaararka xusuusta loo isticmaalo in camera digital keentay. Awoodda ay CardRecovery ayaa waxay kasbatay magac ka mid ah
• The software kabashada xogta telefoonka gacanta ugu fiican oo loo isticmaalo in dib u soo celinta ee photos tirtiray ka kaararka xusuusta loo isticmaalo in kaamirooyinka digital iyo telefoonada.
• Waa ammaan oo bilaash ah khatarta tan iyo markii ay u qabata akhri hawlaha wax aqrinaayo oo keeni lahayn saamayn xun ku kaadhka xusuusta.
• Waxa kale oo ay taageertaa kala duwan ee kaararka xusuusta ay ka mid yihiin Qorshaha XD Picture Card iyo SD Card ka mid ah kuwa kale.
• Soo Celinta xogta ka kaarka SD musuqmaasuq
• Ladnaansho sawiro qaab kasta oo
• Full Edition waa qaali
Waxa uu ka shaqeeyaa xitaa aad u halaagnay sawir iyo video files kaydiyaa ulaha xasuusta, MMC, Micro drive iyo kaarka CF. PhotoRec waa software loo isticmaalo in soo kabashada macluumaadka telefoonka oo la soo saaro hoos v2 GPLV +.
• Waxaa dib u soo celineysa tirtiray videos ama noocyo kale oo file ka telefoonka ama kaadhka xusuusta
• Waxay yaraynaysaa waxyeello dheeraad ah ama laga waayi karo xogta la isticmaalayo ka akhriso kaliya qalab kabashada
• si fiican u shaqaynayaan xataa nidaamka file si xun u burburay ama formatted
• Si fudud in la isticmaalo
• Ma aha in qaab gui
Hel Photo Rec
Operating Systems: shuruud No
Waxaa fududeyneysa habsocodka kabashada xogta ay ka mid yihiin sawir, image files ka drives adag, kaamirooyinka digital iyo emails. Waxa kale oo aad u degaan kartaa Ladnaansho Files My kaas oo sidoo kale la caddeeyey inay
• Waxaa nayaa hawsha kabashada telefoonka ee la xiriirta files geli karo telefoonka ama qalabka kale ee multimedia kasta.
• Fast, fududahay in la isticmaalo iyo ma u baahan tahay xirfado farsamo kasta oo
Waxaa loo qorsheeyay in la soo celiyo mails tirtiray ka bin ku recycle, computer daaqadaha, camera digital iyo MP 3 ciyaaryahan. Recuva waa software free loo isticmaalo kabashada xogta ee telefoonada.
• Tani waa mid ka mid ah software ka soo kabashada macluumaadka telefoonka mobile waa iska diyaar ugu gabi ahaanba lacag la'aan ah.
• Waxaa kaloo samayn kartaa shaqo la mid ah on Windows Computer, MP3 ciyaaryahan iyo sidoo kale digital ah camera.
• Soo Celinta xogta iyo tirtirto awoodaha xogta
• Aad u siman in ay isticmaalaan
• Tan iyo waa bilaash ah kama Ceshadaan waxaa laga yaabaa in macluumaadka qaarkood.
Waxay garan karaa iyo soo celin ilaa 300 files saxiixyada kala duwan iyo sidoo kale video iyo music files. Ku baaqay in ay khasaaro u isticmaalka soo kabasho telefoonka gacanta casri ah waxay ka dhigan tahay sida isticmaalka buugan Ladnaansho software. Formatting iyo portioning si fudud u keeni kartaa in la tirtiro faylasha muhiim ah. s
• software Tani waxay sidoo kale taageertaa drives adag oo laga qaado shirkadaha kala duwan sida Fujitsu iyo Apple iyo kuwo kale.
• Its dhisay geynta u ogolaanaya in ay soo kabsadaan ilaa 300 files oo dhan Saxeexooda kala duwan.
• taageero macaamiisha Good
• Ladnaansho nooc kasta oo xogta
• Dooro version saxda ah xaalad kasta oo gaar ah
Hel buugan Ladnaansho
Operating Systems: Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7/2003 ama 2008 Server
Telefoonada Smart, kamaradaha, Hard drives, kaararka xusuusta yihiin qaar ka mid ah goobaha lagu keydiyo in software this celin karo files ka. Faylal oo fayl la tirtiri karaa in geedi socodka la isticmaalayo telefoonka smart. Undelete 360 waa software si ay u isticmaalaan soo kabashada ee xogta sida. Waa nooc ka mid ah lagu taliyay ee soo kabashada xogta mobile sababtoo ah
• Waxa uu isticmaalaa isku geynta casri ah taas oo dadejisa nidaamka xogta ka soo kabsanaya kaadhka xusuusta aad.
• Waxa ay taageertaa dib u soo kabashada ee files iyo fayl labadaba ay ku jiraan kuwa ku soo ag mara bin recycle ay sabab u tahay iyagoo size .
• Waa lacag la'aan ah oo degdeg ah
• filtarrada Awesome raadinta
• Miyuu lagma daray Tirtirin file
• yaabaa in aanan helin qaar ka mid ah macluumaadka
Hel Undelete 360
Tani waa software ah dabacsan in qashinka waqti lahayn in dib u soo celinta iyo video files audio ka multimedia oo dhan. Qaadashada sawiro la isticmaalayo telefoonada waa hawl caadi ah laakiin daqiiqado qabtay si qalad ah lagu lumin karaa. Isticmaal Wondershare Photo Recovery taas oo ah mid ka mid ah software ugu fiican ku dooday in u ku soo kabashada telefoonka gacanta.
• Dhamaan noocyada maqal iyo muuqaal ah xogta laga badiyay la soo celin karin in ay meesha asalka
• Waa kharash wax ku ool ah oo si sahlan ay u isticmaalaan.
• Ladnaansho sawiro iyo videos qaar ka mid ah
• Ma taageeri qaab FLV
Software ayaa wax ku ool ah si ay u isticmaalaan in soo kabashada ee mails tirtiray, sawiro, videos iyo files audio. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo waxay u baahan tahay xirfado ma ka hor. Wondershare Data Recovery waa user-friendly oo uma baahna xirfadaha ka hor in la isticmaalo.
• Tani software mobile kabashada xogta uu awood u leeyahay in la soo celiyo in ka badan 500 oo qaabab kala duwan ah file ay ku jiraan kuwa ka jira telefoonka.
• Waxay soo celin karaa wax kasta oo fayl ka emails, sawiro, videos, iyo kuwo kale.
Waxay leedahay fududahay in la isticmaalo interface taas oo suuragal ah in user ah inuu ka soo kabsado xiriirada, sawiro iyo fariimaha taleefanada Android. Halkii la isticmaalayo dib waxaad la xiriiri kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) taas oo wax ku ool ah ka soo celiyo ee files lumay wakhtiga ugu gaaban suurogal gudahood.
• Waxaa la jaan qaada versions dhowr ka mid ah telefoonada Android, HTC iyo LG waxaa ka mid ah macluumaadka telefoonka gacanta ugu fiican samaynta kabashada software.
• kaban karto fariimaha tirtiray iyo xiriirada.
. • jaanqaadaan brand telefoonada badan
• kabashada Fast iyo soo kaban karto, inta badan ee ka kooban.
• Qaar ka mid ah qoraalkii ka weyn uma lihin versions cusub android.
Kabsado xogta aad ka Lugood files gurmad oo si toos ah uga iPhone, iPad iyo iPod taabashada adigoo isticmaalaya Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) taas oo awood u leh soo celinta xogta ka telefoonada burburay ama la jejebiyey iyadoon dhibaato in faylasha khasaaro dheeraad ah ama dhaawac.
• Ladnaansho xogta in kasta oo madal i0S
• Ladnaansho xogta kaarka SD musuqmaasuq
• Waxaa laga yaabaa in aan ka shaqeeyaan qaar ka mid ah qoraalkii ka weyn iPod